PoPinVdo – Page2– သတင်းဦး၊သတင်းထူးများ နှင့်​ ဗဟုသုတ
မွေးရာပါ ကိုယ်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသော ဆယ်ကျော်သက်သမီးက သူ့ကို ကြိုးတုပ်၊ ဓားထောက်ပြီး မကြာခဏ မုဒိမ်းကျင့်သူမှာ ခြံချင်းကပ်နေထိုင်သူ အဘိုးဝမ်းကွဲ
October 17, 2018 popin vdoမှုခင်းသတင်းNo Comment on မွေးရာပါ ကိုယ်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသော ဆယ်ကျော်သက်သမီးက သူ့ကို ကြိုးတုပ်၊ ဓားထောက်ပြီး မကြာခဏ မုဒိမ်းကျင့်သူမှာ ခြံချင်းကပ်နေထိုင်သူ အဘိုးဝမ်းကွဲ
မျဉ်းနှစ်ကြောင်း ပြထားသည့် ဆီးစစ်တံအဖြေက တစ်နေ့တခြား ဗိုက်ပူလာသော၊ ၁၇ နှစ် အရွယ် သမီးငယ်တွင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနေသဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူ တုန်လှုပ်သွားသည်။ မွေးရာပါ ကိုယ်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသော ဆယ်ကျော်သက်သမီးက သူ့ကို ကြိုးတုပ်၊ ဓားထောက်ပြီး…
ကြွေလွင့်သွားတဲ့ခုနှစ်စင်ကြယ် (ကြယ်ကြွေညတွေ ကုန်ဆုံးပါစေ)
October 17, 2018 popin vdoမှုခင်းသတင်းNo Comment on ကြွေလွင့်သွားတဲ့ခုနှစ်စင်ကြယ် (ကြယ်ကြွေညတွေ ကုန်ဆုံးပါစေ)
ကြွေလွင့်သွားတဲ့ခုနှစ်စင်ကြယ် (ကြယ်ကြွေညတွေ ကုန်ဆုံးပါစေ) ၁။ ဗိုလ်ကြီး နေမျိုးအောင် (DSA-31, PC-7 ပျက်ကျ) ၂။ ဗိုလ်ကြီး နေမင်းအောင်(OTC-20,S-2ခရီးစဉ်ပျက်ကျ၊ ၂၀၀၁/ဖေ) ၃။ ဗိုလ်ကြီး နေလင်းအောင် (DSA-35, မလေးရှားတွင်ပျက်ကျ) ၄။ ဒုမှူးကြီး…
October 17, 2018 popin vdoမှုခင်းသတင်းNo Comment on ကျောင်းသူရဲ့ကားနဲ့တိုက်မိရာမှ ဒဂုံတက္ကသိုလ် လက်ထောက်ကထိကဆရာမ ကွယ်လွန်
ဒဂုံတက္ကသိုလ် ဥပဒေပညာဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ကထိက ဆရာမဒေါ်အိကေခိုင်မင်းသည် အဝေးသင်ကျောင်းသူတစ်ဦးလိုက်ပါလာသော ကားနှင့်တိုက်မိ၍ အရေးပေါ်ဆေးရုံရောက်သွားရာမှ ကွယ်လွန်သွားရပြီဖြစ်ကြောင်း ဒဂုံတက္ကသိုလ် ဆရာဆရာမများသမဂ္ဂထံမှ သိရသည်။ အခင်းဖြစ်စဉ်မှာ အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီကျော်အချိန်ခန့် က…
October 17, 2018 popin vdoဗဟုသုတNo Comment on မြန်မာပြည်ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ဒီစာကိုဖတ်ထားသင့်တယ်
မြန်မာပြည်ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ဒီစာကိုဖတ်ထားသင့်တယ်… အိန္ဒိယသမ္မတ ပြောသွားတဲ့ “မင်းရဲ့နိုင်ငံအတွက် အချိန် ၁၀ မိနစ်လောက် ပေးနိုင်မလား´´တဲ့ ပေးနိုင်ရင် ဒီစာလေးကိုဖတ်ကြည့်ပါ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေအတွက် လည်းတိုက်ဆိုင်လွန်းလို့ သူငယ်ချင်းတို့အချိန်ယူပြီး ဖတ်စေချင်တယ်။ အချိန်နည်းနည်းပေးပြီး ဖတ်ပေးပါ။ ဒီစာကို…
မြင်တွေ့သူတိုင်းရဲ့ အသည်းနှလုံးကိုဗြောင်းဆန်သွားစေမယ့် မြွေဈေးတန်း
October 17, 2018 popin vdoထူးဆန်းထွေလာNo Comment on မြင်တွေ့သူတိုင်းရဲ့ အသည်းနှလုံးကိုဗြောင်းဆန်သွားစေမယ့် မြွေဈေးတန်း
မြွေဆိုတဲ့ သတ္တဝါဟာ လူကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ သတ္တဝါဖြစ်ပြီး အခန့်မသင့်ရင် သူ့ရဲ့အဆိပ်ကြောင့် လူ့အသက်တောင် ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လူတော်တော်များများက မြွေမြင်ပြီး ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ ထွက်ပြေးတဲ့သူက ခပ်များများ ရယ်ပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ မြွေသားဆိုတာ နေ့စဉ် စားနေကြ…
မကြောက်အလန့် လုပ်ရဲလိုက်ကြတာ… လုပ်ရက်လိုက်ကြတာ.
October 17, 2018 popin vdoထူးဆန်းထွေလာNo Comment on မကြောက်အလန့် လုပ်ရဲလိုက်ကြတာ… လုပ်ရက်လိုက်ကြတာ.
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဝမ်းတွင်းမြို့နယ် ခံဘူးရွာနဲ့ ရွှေဖလားကန်ရွာကြားမှာ တည်ထားတဲ့ရွာစိုးဘုရားကြီးကို မနေ့ညက ဌာပနာဖောက်သွားပါတယ် … ခုပုံထဲမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း ဘုရားရဲ့အရှေ့ဘက်ကနေဖောက်ထွင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်… ဒီဘုရားကြီးထဲမှာ ဘာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိတဲ့အတွက် ဘာတွေပါသွားလဲ ဆိုတာလည်း ဘယ်သူမှ တပ်အပ်မပြောနိုင်ပါဘူး … ပထမတစ်ကြိမ်တုန်းက ဘုရားကြီးရဲ့တောင်ဘက်မှာဖောက်ထွင်းခဲ့ပေမဲ့…
အရှက်ကို အသက်နဲ့ လဲသွားတဲ့ လှိုင်သာယာမှ ဖြစ်ရပ်မှန်
October 17, 2018 popin vdoလူမှုဘ၀No Comment on အရှက်ကို အသက်နဲ့ လဲသွားတဲ့ လှိုင်သာယာမှ ဖြစ်ရပ်မှန်
မုနိမြီ၊ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ ဥက္ကာလမ်း၊ အပျိုကြီးအဆောင်၌ အသက်၂၄နှစ်ခန့် မိန်းကလေးတစ်ဦး ဆွဲကြိုးချ သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။ “မဥမ္မာရီ အသက် ၂၄နှစ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့နယ်၊ ကြွီတဲ့ကျေးရွာနေ…